]Slat bed-ụlọ ọrụ Alice
Slat bed-ụlọ ọrụ Alice
Ihe ndị bụ isi nke ihe ndina slat bụ nke a na-eji osisi eme ihe, a na-ejikọta arịa ụlọ site na ngwaike, nke dị mma maka ịkwasa, njem na ntinye. N'ozuzu, ụdị ahụ dị mfe, ọ naghị emebi emebi, adịghị agbawa, ọnụ ahịa ya dịkwa oke. Enwere ọtụtụ n'ahịa.
Ihe bụ isi bụ panel nke dabeere na osisi, na ngwá ụlọ na-ejikọta ya na ngwaike, nke dị mma maka ịkwasa, njem na ntinye. N'ozuzu, ụdị ahụ dị mfe, ọ naghị emebi emebi, adịghị agbawa, ọnụ ahịa ya dịkwa oke. Enwere ọtụtụ n'ahịa. Otú ọ dị, n'ihi njikọ ngwaike a na-ejikarị eme ihe, ihe ndina slat na-adịkarị ka ọ ga-ejikọta ya nke ọma, nke ga-eme ka ahụ akwa ahụ tọpụ ma mee mkpọtụ. Ọ ka na-enweghị nchebe gburugburu ebe obibi. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-eji particleboard na ihe ndị ọzọ emepụta ihe, ma ihe mkpuchi ahụ adịghị agwụ agwụ Ọ bụrụ na a kechie ya, ọ dị mfe ịhapụ formaldehyde, nke na-emerụ ahụ mmadụ. Otú ọ dị, a na-edozi nke ọma ma na-enyocha ihe ndị a na-emekarị, karịsịa ngwá ụlọ panel nke akara ngosi.
Ịzụta akwa akwa:
1. Ogo efere na nchekwa gburugburu ebe obibi. N'ihi na osisi-ụdị osisi bed bụ nke wuru osisi sịntetik, ọ bụ tumadi na-agụnye atọ ụdị: elu-density osisi, ọkara-njupụta osisi (ọkara-njupụta osisi), na urughuru osisi. N'ime ha, bọọdụ njupụta dị elu nwere ike kachasị elu, ọ dịghị mfe ịgbawa, nwere nkwụsị mmiri kachasị mma, ma dị oke ọnụ; MDF na-esote particleboard, nke dị nro, na-enweghị mmiri na-eguzogide mmiri na ọnụ ala dị ala. Nchedo gburugburu ebe obibi nke ihe ahụ bụkwa otu n'ime isi njikọ ndị a na-apụghị ileghara anya.
2. Lezienụ anya na ihe nkiri agba n'elu akwa akwa. N'ozuzu, a na-ese ihe ndina ka ọ nwee agba mara mma. Ịdị mma nke agba agba bụ ihe dị mkpa maka ịnwale àgwà akwa. Ihe ndina na-abụkarị nke agba matt na agba na-egbuke egbuke. The matt agba na-enwe a bit matte na bụ ihe na-eyi na-eguzogide; agba elu na-egbuke egbuke nwere agba na-egbuke egbuke ma ọ bụghị dị ka abrasion-eguzogide dị ka matt, ma agba na-egbuke egbuke, nke na-eme ka ndị mmadụ na-ele anya nke ọma ma dị mfe ihicha.
3. Lezienụ anya na ịhazi ọkpụkpụ. Mgbe ị na-azụrụ ihe, ị nwere ike nwalee ngbanwe nke etiti ahụ site na iji aka gị wetuo ya, ma ọ bụ ị nwere ike iji ụkwụ gị guzoro na okpokolo agba abụọ ahụ iji tụọ ogo ibu ibu. Na mgbakwunye, lelee oke na ọnụọgụ nke ọkpụkpụ ahịrị. Enwere ahịrị skeleton 26 n'ọtụtụ ahịrị, yana ihe dịka ahịrị 18-22 nke ndị nkịtị.
4. Lezienụ anya na àgwà nke ịcha osisi na akụkụ ígwè. Lezienụ anya nke ọma na-elele ịcha hụrụ àgwà, ọnụ na elu mma àgwà na osisi n'ọdụ ụgbọ mmiri àgwà. A na-achọ akụkụ ígwè ahụ ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, dị nro, na elu bụ electroplated, na-enweghị nchara, burrs, wdg, na nkenke nke akụkụ mating dị elu.
Buru Akwa akwa akwa-ụlọ ọrụ Alice
Iron bed-ụlọ ọrụ Alice OSOTE